Semalt Expert: Kukosha Kwokupikisa Kutamba
Spam chinhu chinonyanya kukanganisa kuwanda kwevanoshandisa internet. Muzviitiko zvakawanda, makuhwa makuru anowanikwa mukubatsirwa kwevakuru vezvakaipa. Mune dzimwe nguva, vanhu vanotarisana nenyaya dzakawanda dzekutya uye kuvhiringidzika panguva yechiitiko chekutsvaga.
Ivan Konovalov, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anoyeuchidza kuti zvakakosha kuti munhu wese ataure kuparadzirwa pakarepo. Semuenzaniso, unogona kudana 0300 123 20400 kuti upe utsere kana kukanganisa. Kuzivisa kutyisa kunobatsira National National Intelligence Bureau mukutsvaga pamwe chete nemamwe mazano anogadzirisa - nozzle calculation design. Kana uchinge uchitaura nyaya yechirwere, iwe unogona kujekesa pane danho rinotevera, izvo zvichitevera kunetseka kwako. Muzviitiko zvizhinji, mitsara iyi inoita kuti kuve nokunyorwa kwezviitiko zvinokonzerwa nekutsvakurudza. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, izvi zvinodaro hazvingatungamiri pakuongorora.
Kuzivisa kukanganisa kuRoy Mail
Ruzhinji rwemapepa epamende hunoitika nekufambisa kwevanokuvadza. Vakawanda vekupa email vapepa vane mazamu anoita kuti vashandisi varatidze dzimwe mharidzo se spam. Zvakakosha kushandisa sangano rinopesana nesipamisi, kunyanya pane muteveri weEmail akachengeteka. Nevashandi veRail mail, chero munhu anogona kuudza spam nezvimwe zviitiko zvine chokuita neFreepost Scam Mail, PO Box 797, Exeter EX1 9UN. Izvo zvinokosha zvakare kusimudza ruzivo kune vatengi vako. Yeuka, kuchengeteka kwewebsite yako uyewo yevashanyi vako iri mumaoko ako. Dzimwe nzvimbo dzepa email apo iwe unogona kuudza scam dzinosanganisira 0345 611 3413 uye scam.mail@royalmail..com.
Mune zvimwe zviitiko, ungada kuudza nyaya ye spam zvakananga kuburikidza nefoni. Muchiitiko ichi, unogona kutaura neIfoni-yakabhadhara Services Authority (PSA). Zvakakosha kuziva kuti basa iri harifaniri kubhadharwa mari uye zvikwereti pane zvauri kutakura. Iwe unogonawo kushanyira webhusaiti yePSA kuti ubike zviitiko izvi kana kutotumidza nhamba yepamusoro 0300 303 0020.
Rega scam email
Chimwe chezviyeuchidzo zvinokosha kutora pakucherechedza spam kuripoti iyo. Kune nzvimbo dzakawanda kwaungagona kuzivisa spam. Chokutanga pane zvose, zvakakosha kuisa ma email se spam mushure mekunge mavagamuchira. Ichi chiyero chinotumira mharidzo kune wako muteveri weimeri kuti abvise mharidzo kubva kunzvimbo iyo kana kero. Rimwe danho rinogona kusanganisira kutora matanho ari kumusoro. Vashandi vanogonawo kutora zvimwe zvezviitiko izvi kuburikidza nekubatanidza nhamba yepamusoro yemapurisa apo iwe unogona kuudza nyaya ye spam zvakananga. Zvakakoshawo kusimudza ruzivo pane zvimwe zvekutsvaga kwekutsvaga, izvo zvinogona kuita kuti webhusaiti itambure zvikuru.
Zvakakosha kunongedzera kuipa uye mamwe mabasa emutambo asingabvumirwi nemutemo. Vanhu vazhinji vanotambura kurasikirwa kukuru muwebsite dzavo dzebhizimisi kuburikidza ne spam. Somugumisiro, zvakakosha kuzvichengetedza kusvika pane zvekare nenzira dzezvino uye nzira dzokubata spam. Mune dzimwe nguva, unogona kurondedzera spam zvakananga kune zviremera zvakakodzera. Ichi chiyero chinogona kukonzera dzimwe nzira dzinokurumidza kubatsira kubatsira kudzora mamiriro e spam. Mimwe yenzvimbo dzaunogona kurondedzera spam dziri mune iyi nhungamiro. Iko inokosha uye inogona kuita mishonga yakachengeteka yekuita mabasa epanzvimbo.